The email yekutanga yekutengesa yakatumirwa muna 1978, yakakonzera $13 miriyoni mukutengesa, uye yakatanga iyo yave imwe yeanonyanya kushandiswa nzira dzekushambadzira kunyangwe nanhasi.
Tichifunga nezvekutanga kwayo, email haina kupenya sedzimwe nzira nyowani sekutumira mameseji uye kushamwaridzana, asi inzira inoshanda yekuvaka vateereri vane yavo vanowana mhinduro.
Vatengi vako havape ruzivo rwavo zvishoma, uye - kana vakashandiswa zvakanaka - email kushambadzira kunogona kuve zvese hukama-kuvaka uye purofiti-yekuvaka chishandiso.
Saka, kushambadzira email kunoshanda sei zvakadaro?
Zvino ngationgororei paunofanirwa kushandisa email kushambadzira uye mamwe mabhenefiti uye manhamba anotsigira chikonzero nei email kushambadzira kwakakosha.
Tenzi izvo zvakakosha zveemail kushambadzira ine yemahara online kosi.
Nguva Yekushandisa Email Marketing
Pane nzira dzakawanda dzekushandisa email kushambadzira - dzimwe dzakajairika kusanganisira kushandisa zano ku:
Vaka hukama: Gadzira hukama kuburikidza nekuita kwemunhu.
Wedzera ruzivo rwemhando: Chengetedza kambani yako nemasevhisi ako ari pamusoro-yepfungwa panguva iyo tarisiro yako yagadzirira kuita.
Kurudzira zvirimo: Shandisa email kugovera zvine chekuita neblog zvemukati kana zvinhu zvinobatsira nezvako zvinotarisirwa.
Gadzira zvinotungamira: Nyevedza vanyoreri kuti vape ruzivo rwavo pachavo mukutsinhana nechinhu chavanozowana chakakosha.
Paka zvigadzirwa zvako: Simudzira zvigadzirwa zvako uye masevhisi.
Kurera zvinotungamira: Fadzai vatengi vako nezvirimo zvinogona kuvabatsira kubudirira muzvinangwa zvavo.
Iko kwapera 4 bhiriyoni vashandisi veemail pasi rese, saka kana iwe uchitsvaga nzira yekusvika nayo vatengi vako, email ndiyo nzvimbo yakanaka yekuvawana.
Sezva 2020, email inogadzira $36 padhora rega rega rakashandiswa.
79% yevatengesi nyora email kushambadzira mune yavo yepamusoro 3 nzira dzekutengesa zvakanyanya.
Email vashanyi ndivo kazhinji kutendeutsa pamafomu.
Zvichida chikonzero chakanakisa chekushandisa email kushambadzira ndechekuti iwe ndiwe chiteshi. Kunze kwe kutevedzera mitemo, hapana chekunze chinokonzeresa kuti sei, rini, kana nei uchisvika kune vanyoreri vako.
Email Marketing Stats neIndasitiri
Mitemo yekushambadzira yeemail inoshanduka zvichienderana neindasitiri yako uye wauri kushambadzira. Pazasi pane mamwe maemail ekushambadzira maitiro eB2B, B2C, ecommerce, uye makambani ezvivakwa anogona kuzivisa yako email yekushambadzira zano.
Email Marketing Stats yeB2B
31% yeB2B vatengesi iti tsamba dzeemail ndiyo nzira yakanakisa yekurera vanotungamira.
Email ndiyo yechitatu-yepamusoro vane-media papuratifomu B2B vatengesi vaimboita
govera zvinyorwa mumwedzi gumi nemiviri yapfuura.
Vatengesi veB2B vanoti email kubatanidzwa ndiyo yechina inonzwisisika metric paunenge uchiongorora mashandiro egore rapfuura, kupfuura midhiya yenhau, tsvaga yekutsvaga, uye inotungamira mhando.
Email Marketing Stats yeB2C
Inosvika makumi matanhatu muzana e-e-commerce, zvinhu zvevatengi uye masevhisi, uye makambani ekutengesa ari personalizing maimeri zvichibva pane zvakatengwa kare.
37% yevatengesi veB2C tumira maemail ekushambadzira mazuva ese kune vakanyoresa.
Email Marketing Stats yeEcommerce
57.2% yevatengesi vanoti ecommerce brands yavanotonga vane 1,000 kusvika 10,000 vanobatika pane yavo email zvinyorwa.
85.7% yevatengesi ve ecommerce vanoti chinangwa chekutanga chebhizinesi cheemail zano ravo chiri kuwedzera ruzivo rwemhando.
Vanosvika makumi manomwe neshanu muzana evatengesi ve ecommerce vanoti dambudziko guru ravakatarisana naro neemail rakaderera rakavhurika mitengo.
Kutanga neEmail Marketing
Usati waremerwa neyakakura mikana yekushambadzira email, ngatiputse mashoma akakosha matanho ekuti iwe utange kuvaka yakasimba email mushandirapamwe unofadza vatengi vako.
Unogona kufunga nezvematanho aya senzira yekugadzira yakabudirira email yekushambadzira zano.
Gadzira Email Marketing Strategy
Unogona dzidza nzira yekuvaka inoshanda email zano uye kutumira maemail ayo vanhu vanoda chaizvo kuverenga. Zvinongotora chirongwa (chimwe chinogona kuputswa kuita mashoma akakosha matanho).
Funga nezvematanho mashanu anotevera sechiratidziro cheemail yako zano. Tichanyura zvakadzama mune zvimwe zveizvi munguva pfupi.
1. Tsanangura vateereri vako.
Iyo email inoshanda ndeye email yakakodzera. Kufanana nezvimwe zvese mukushambadzira, tanga neyako mutengi munhu, nzwisisa zvavanoda, uye gadzirisa yako email mushandirapamwe kune zvinodiwa nevateereri vako.
2. Simbisa zvinangwa zvako.
Usati wauya nezvinangwa zvedanidziro yako, unganidza mamwe mamiriro.
Iwe unozoda kuziva avhareji eemail manhamba eindasitiri yako uye woashandisa semabhenji ezvinangwa zvako.
Sezvauri kuona, aya mabhenji anosiyana zvakanyanya neindasitiri. Kushandisa gwara iri kuchakubatsira iwe kugadzira zvinangwa zvinogoneka zvechikwata chako.
3. Vaka yako email rondedzero.
Unoda vanhu kuti vatumire email, handiti? Rondedzero yeemail (tichavhara maitiro ekuita edza yako email list muchikamu chinotevera) iboka revashandisi vakakupa mvumo yekuvatumira zvinoenderana nazvo.
Kuti uvake iyo rondedzero, iwe unoda nzira dzinoverengeka dzekuti ungasarudze kupinda kuti ugamuchire maemail ako.
Usaore mwoyo kana uine vanhu vashoma pane yako rondedzero kuti utange. Zvinogona kutora nguva kugadzira. Zvichakadaro, bata wega wega anonyoresa uye tungamira segoridhe, uye iwe unotanga kuona yako email runyorwa ichikura organically.
4. Sarudza email yemushandirapamwe mhando.
Mishandirapamwe yeemail inosiyana uye kuedza kusarudza pakati pavo kunogona kukurira. Unotumira tsamba yevhiki nevhiki here? Unofanira kutumira zviziviso zvechigadzirwa chitsva here? Ndeapi mablog ekutumira akakodzera kugovera?
Iyi mibvunzo inotambudza mutengesi wese. Mhinduro ndeye subjective.
Unogona kutanga nekudzidza nezve marudzi eemail campaigns zviripo, wobva wasarudza chakanakira vateereri vako.
Iwe unofanirwawo kuseta mazita akasiyana emhando dzakasiyana dzeemail, saka vatengi uye tarisiro vanogona kusaina chete maemail anoenderana navo.
5. Ita purogiramu.
Sarudza kuti kangani kaunoronga kubata rondedzero yako uye zivisa vateereri vako pamberi.
Nenzira iyi, ivo vanozoziva chaizvo zvekutarisira mberi kwenguva. Kukanganwa kuita izvi kunogona kutungamira kune yakakwira kusanyoreswa zvinyorwa uye inogona kukuwana iwe mune yavo spam.
Mukuwedzera, kana wangoronga purogiramu, iva anowirirana. Ichavaka kuvimbana uye iva nechokwadi chekuti unogara uri pamusoro pepfungwa kune vateereri vako.
6. Kuyera zvawawana.
Izvi hazvifaniri kushamisa. Sevatengesi, tinoyera zvese. Kungwarisa nezvese kiyi metric kuchakubatsira iwe kuita shanduko diki kumaemail ako ayo anozoburitsa hombe mhedzisiro.
Isu tichabata pane iyo KPIs chaiyo yekutarisa mune zvishoma (kana kuti unogona kusvetukira mberi).
Iye zvino zvawanzwisisa matanho ekugadzira email yekushambadzira zano, isu tichatarisa izvo zvinobatanidzwa mukuvaka yako email runyorwa.
Maitiro Ekugadzira Yako Email Rondedzero
Iye zvino kune chikamu chinonakidza: kuzadza email yako runyoro neshungu dzetarisiro dzinofarira kunzwa kubva kwauri.
Kune vazhinji nzira dzekugadzira dzekuvaka yako email runyorwa (uye, kwete, kutenga maemail haisi imwe). Nehungwaru kutaura, rondedzero yekuvaka inodzika kune zvinhu zviviri zvakakosha zvinoshanda zvakabatana kukura nhamba dzevanyoreri vako: lead magineti uye. mafomu ekupinda-mukati.
Iyo Email Newsletter Lookbook
Maitiro ekugadzira Email Newsletters Isingayamwi
Heano maitiro ekutanga kuvaka uye kukura yako email runyorwa.
1. Shandisa magineti ekutungamirira.
Yako inotungamira magineti yakafanana sezvainonzwika: chimwe chinhu chinokwezva tarisiro kune yako email runyorwa, kazhinji muchimiro chekupihwa kwemahara. Iyo yekupihwa inogona kutora akati wandei mafomati, inofanirwa kuve yakakosha kune yako tarisiro, uye inopihwa mahara mukutsinhana neemail kero.
Pane dambudziko rimwe chete: Vanhu vava hyper-kudzivirira yeruzivo rwavo. Iwe haugone kutarisira kugamuchira email kero pasina kuitsinhanisa kune chimwe chinhu chakakosha.
Funga nezvegineti inotungamira ine basa, inobatsira, uye inoita kuti hupenyu hwako huve nyore.
Heano zvishoma mhando dzemagineti ekutungamirira unogona kugadzira:
Mshumo kana Dzidza
Webinar kana Kosi
Kana iwe uri mupfupi pane zviwanikwa, unogona kunyange dzorera zvirimo zvako kuti ugadzire magineti anotungamira.
Nzira Yekugadzira Yakakura Inotungamira Magnet
Rangarira kuti yako lead magineti inofanirwa kuve yakakosha kune yako tarisiro. Heano maitiro mashoma ekuona kuti uri kugadzira yakakosha asset kune yako yaunogona rondedzero.
Ita yako yekupa mhinduro-yakatarisana uye iite.
Ipa ruzivo runoshanda runogadzirisa dambudziko uye rinogadzira nzira yechokwadi yekuwana mhinduro.
Ita shuwa kuti asset iri nyore kushandisa.
Magineti anotungamira anofanirwa kuendeswa mune yedhijitari fomati. Ingave iri PDF, peji rewebhu, vhidhiyo, kana imwe fomati, ita kuti zvive nyore kune yako nyowani inotungamira kuitora nekuishandisa.
Gadzira chipo chako uchifunga nezveramangwana.
Hapana chakashata sekusaina kusaina kune yakakura kupa kungoodzwa mwoyo nezvirikutevera. Ita shuwa kuti kupihwa kwako kwanoenderana nehukoshi hwauchapa mukati mehukama hwako, zvikasadaro unogona kukanganisa kukanganisa kuvimba.
Bata magineti yako yekutungamirira sedombo rekukwira kune yako yakabhadharwa mhinduro.
Iyo poindi yetsamba yako yeemail ndeyekupedzisira kutungamira vanyoreri kune yakabhadharwa inopihwa. Iwe unopa zvemahara zvemukati kuratidza kukosha kwaunopa sekambani, uye izvo zvemahara zvinopihwa zvinozopedzisira zvatungamira kune chako chigadzirwa kana sevhisi.
Gadzira zvinopihwa zvinoenderana nedanho rega rega rerwendo rwemutengi.
Kutungamira kutsva kwega kwega kuchave pane imwe nhanho ye rwendo rwevatengi, uye ibasa rako kuziva kuti ndeipi.
Rongedza runyoro rwako kubva pakutanga nekupa zvakaparadzana zvekusarudza-kupinda zvinoenderana nedanho rega rega rerwendo rwemutengi. Iwe unogona kutaura zvakawanda nezve tarisiro yekufunga nezve izvo zvavanodya.
2. Gadzira fomu rinokwezva rekupinda.
Yako yekupinda-fomu ndeye nzira yaunowana nayo ruzivo rwetarisiro yekuwedzera kune yako runyorwa. Ndiro gedhi pakati peako ramangwana rinotungamira uye inoshamisa asset yawakagadzira uinavo mupfungwa.
Heano mamwe matipi ekugadzira inokwezva yekupinda fomu:
Gadzira dhizaini inoyevedza uye inobata musoro musoro.
Fomu rako rinofanirwa kuve nechiratidzo, kumira kunze kubva papeji, uye kukwezva vanhu kuti vanyore. Iwe unoda kufadza vaverengi nekupa.
Ita kuti kopi ienderane neinopihwa.
Nepo chinangwa chako chiri chekuti vanhu vaise ruzivo rwavo, hakusi kuvanyengedza. Chero ruzivo rwuri pafomu rako runofanira kunge rwuchimiririra chokwadi chekupihwa.
Chengeta fomu iri nyore.
Iyi inogona kunge iri imwe yekudyidzana kwako kwekutanga nemutarisiri wako. Usavatya kure nefomu refu ine minda yakati wandei.
Bvunza ruzivo rwakakosha chete: zita rekutanga uye email inzvimbo yakanaka yekutanga.
Seta fomu rako rekupinda kuti risimbiswe kaviri.
Zvinogona kuita sezvisingabatsire kubvunza vanyoreri vako kuti vapinde mumaemail ako kaviri, asi kumwe kutsvagisa pamitengo yakavhurika kunoratidza kuti vatengi vangasarudza yakasimbiswa opt-in (COI) email kupfuura email yekugamuchira.
Ita shuwa kuti kuyerera kunoshanda.
Zvitore iwe kuburikidza neruzivo rwemushandisi usati waenda kunogara. Tarisa kaviri kuti fomu rinoshanda sezvakarongwa, peji rekutenda riri kurarama, uye kupa kwako kunounzwa sekuvimbiswa.
Iyi ndeimwe yemafungiro ako ekutanga ekutungamira kwako kutsva - ita kuti ive nyanzvi uye yakanaka.
Tevere, ngatitorei nguva yekuvhara mamwe-anogamuchirwa-email ekushambadzira akanakisa maitiro ane chekuita nekutumira maemail ekushambadzira.
Kana zvese zvikafamba zvakanaka, unenge wavaka runyoro rwakasimba rwevanyoreri uye vanotungamira vakamirira kunzwa kubva kwauri. Asi iwe haugone kutanga kutumira email parizvino kunze kwekunge iwe uchida kuguma mune spam folda, kana zvakanyanya, yakavharika runyorwa.
Hezvino zvinhu zvishoma zvakakosha zvekuchengeta mupfungwa usati watanga kutumira email rondedzero yako yawakashanda nesimba kuvaka.
1. Sarudza email yekushambadzira sevhisi.
Iyo email yekushambadzira mupi (ESP) inzvimbo huru kana iwe uchitsvaga chero nhanho yerutsigiro uchinyatso gadzirisa yako email kushambadzira kuedza.
Semuyenzaniso, HubSpot's Email Kushambadzira chishandiso inokutendera kuti ugadzire nemazvo, kugadzirisa, uye kugadzirisa maemail ekushambadzira anonzwa uye anotaridzika hunyanzvi pasina vagadziri kana IT.
Pane akasiyana maficha ekukubatsira iwe kugadzira akanakisa email ekushambadzira ekushambadzira uye kutsigira ako ese eemail ekushambadzira zvinangwa.
Pamusoro pezvo, iwe unogona kuongorora kubudirira kweiyo email kushambadzira kuitira kuti iwe ugone kugovera iyo data inonyanya kukosha kubhizinesi rako nechikwata chako. Chikamu chakanakisisa? Unogona kushandisa HubSpot's Email Marketing sevhisi ye vakasununguka.
Heino mienzaniso yemaficha masevhisi seHubSpot inopa yekufunga riini kusarudza email service provider:
CRM chikuva chine segmentation kugona
Kumira kwakanaka neInternet Service Providers
Mukurumbira wakanaka sewe email service provider (ESP)
Zviri nyore-kuvaka-mafomu, mapeji ekumhara, uye maCTA
Nzira dzakareruka dzekutevedzera nemirairo yeemail
Kugona kupatsanura kuyedza maemail ako
2. Shandisai email marketing tips.
Kunyange iwe usingafungi kaviri nezve mafomati kana mutsara wenyaya weemail waunotumira kushamwari, kushambadzira email kunoda kutariswa kwakawanda. Zvese kubva panguva yaunotumira email yako kumidziyo iyo email yako inogona kuvhurwa zvine basa.
Chinangwa chako neemail yese ndeye gadzira zvimwe zvinotungamira, izvo zvinoita kuti kugadzira email yekushambadzira kuve kwakanyanya kubatanidzwa pane mamwe maemail awakanyora.
Ngatibatei pane zvikamu zveemail yakabudirira yekushambadzira:
Kopa: Iyo kopi iri mumuviri weemail yako inofanirwa kuenderana nezwi rako uye inonamatira kune imwe chete musoro.
Mifananidzo: Sarudza mifananidzo yakagadziridzwa kune ese maturusi, inobata maziso, uye yakakodzera.
CTA: Kudaidzira kwako-ku-chiito kunofanirwa kutungamira kune yakakodzera kupa uye kumira kunze kubva kune yese email.
nguva: Kubva pane a kudzidza iyo yakacherekedza mhinduro dzemamiriyoni makumi maviri emaemail, Chipiri na20 AM ET ndiro zuva rakanakisa uye nguva yekutumira email yako.
Kupindura: 55% yemaemail anovhurwa panharembozha. Yako email inofanirwa, saka, yakagadziridzwa kune iyi pamwe nemamwe ese maturusi.
Kusarudzika: Nyora email yese sekunge uri kuitumira kushamwari. Iva munhu uye taura nemuverengi wako nezwi rinozivikanwa.
Subject Line: Shandisa mutauro wakajeka, unoshanda, unokwezva wakasarudzika uye wanoenderana nemuviri weemail.
100 Email Chinyorwa Mitsetse Isu Takanyatso Kudzvanya
3. Shandisa email segmentation.
Segmentation irikutyora yako hombe email runyorwa kuita diki-zvikamu zvine chekuita neakasarudzika evanyoreri maitiro, zvaunofarira, uye zvaunofarira.
Vanyoreri vedu vanhu, mushure mezvose, uye isu tinofanira kuita zvatinogona kuvabata saizvozvo. Izvi zvinoreva, kwete kutumira generic email blasts.
Takataura nezve segmentation muchidimbu pamusoro. Chikonzero nei iyi musoro wakakosha kuti utaure kaviri ndechekuti, pasina iyo, iwe unomhanya munjodzi yekutumira zvisiri izvo kune vanhu vasiri ivo uye kurasikirwa nevanyoreri.
Nei uchifanira kugovera yako email runyorwa?
Wese munhu anosaina kuti agamuchire maemail ako ari padanho rakasiyana rekugadzirira kushandura kuita mutengi (ndicho chinangwa chekupedzisira pane zvese izvi).
Kana iwe ukatumira coupon yedhisheni yechigadzirwa chako kune vanyoreri vasingatomboziva nzira yekuongorora dambudziko ravo, ungangorasikirwa navo. Imhaka yekuti uri kusvetuka chikamu chaunovaka kuvimbana uye kukudziridza hukama.
Yese email yaunotumira inofanirwa kubata vanyoreri vako sevanhu vaunoda kubatana navo, kusiyana neboka remadhiraivha rauri kuyedza kupinza mubhokisi-saizi-inokodzera-ese bhokisi.
Paunonyanya kugovera runyoro rwako, kuvimba kwaunoita neako madhairekitori uye zviri nyore kuvashandura gare gare.
Maitiro ekugovera Email Lists
Nhanho yekutanga muzvikamu kugadzira magineti ekutungamira akaparadzana uye mafomu ekupinda pachikamu chega chega cherwendo rwemutengi. Nenzira iyo, vaunosangana navo vanozopatsanurwa kuita rondedzero dzakasiyana.
Kupfuura izvozvo, email ekushambadzira mapuratifomu anotendera iwe kuti udaro segment your email list nekuonana nedata uye maitiro ekukubatsira kutumira maemail chaiwo kune vanhu chaivo.
Hedzino dzimwe nzira dzaungagona kuputsa rondedzero yako:
Kuziva, kufunga, danho resarudzo
Kubatanidzwa kwekare nemhando yako
Muchokwadi, iwe unogona kugovera rondedzero yako chero nzira yaunoda. Ingoita shuwa yekuve wakasarudzika sezvinobvira kana uchitumira maemail kune yega yega boka.
4. Gadzirisa yako email kushambadzira.
Izvozvi zvaunoziva kuti ndiani wauri kutumira email uye zvakakosha kwavari, zvichave nyore kutumira maemail ane munhu anobata.
Chokwadi, uri kutaura nevanhu vanopfuura zana panguva imwe chete, asi madhiri ako haafanire kuzviziva.
Chirevo cha2021 neLitmus yakaratidza kuti 80% yevatengi vanogona kutenga kubva kumhando inopa zviitiko zvemunhu.
Kunyatso kutyaira iyi poindi kumba, funga izvi: Maemail akasarudzika ane mareti akavhurika akakwira. Mukuwedzera, 83% yevatengi vari vanoda kugovera data yavo kugadzira chiitiko chemunhu.
Waunganidza iyi data yakasiyana. Yako email yekushambadzira software inobvumira personalization tokens. Iwe hauna chikonzero chekutumira maemail egeneric izvo zvisingaite kuti ma lead ako anzwe akakosha.
Hedzino nzira shoma dzekugadzirisa maemail ako:
Wedzera nzvimbo yezita rekutanga mumutsara wezvidzidzo uye/kana kukwazisa.
Batanidza ruzivo rwenharaunda kana zvakakodzera.
Tumira zvirimo zvinoenderana nenhanho yehupenyu hwemutungamiri wako.
Tumira chete maemail ane chekuita nekupedzisira kubatanidzwa kwave kuita nemhando yako.
Nyora nezve akakodzera uye/kana zviitiko zvako pachako, senge mazororo akananga dunhu kana mazuva ekuzvarwa.
Pedzisa maemail ako neako siginecha kubva kumunhu (kwete kambani yako).
Shandisa yakakodzera kudana-ku-chiito kune chinopihwa icho muverengi achawana chinobatsira.
5. Batanidza email marketing automation.
Automation iri kuisa yako rondedzero segmentation yekushandisa.
Kana uchinge wagadzira chaiwo madiki madiki, unogona kutumira otomatiki maemail anonangwa zvakanyanya. Pane nzira mbiri dzekuita izvi.
An autoresponder, anozivikanwawo semushandirapamwe wekudonha, nhevedzano yemaemail anotumirwa kunze otomatiki kana akonzereswa nechimwe chiitiko. Semuenzaniso, kana mumwe munhu akadhawunirodha ebook yako.
Iwe unozoshandisa iwo nhungamiro imwe cheteyo yekunyora maemail ako atakambokurukura kuti uve nechokwadi chekuti vaverengi vako vanowana maemail ako anobatsira uye anonakidza. Iwe unofanirwa kusarudza kuti ungade kuti maemail ako atumirwe zvakadii, mazuva mashoma kana mavhiki kana mwedzi.
Chinhu chikuru pamusoro pe autoresponders ndechekuti iwe unogona kuimisa uye kuikanganwa. Wese mushandisi ari chikamu cheako autoresponder anogashira email yega yawakawedzera kune yakatevedzana.
Workflows inotora autoresponders imwe nhanho mberi. Funga nezvazvo Workflows semuti unoyerera une hongu/kwete matavi anozoita zviito zvinoenderana nemaitiro aunoisa.
Workflows ine zvikamu zviviri zvakakosha:
Maitiro ekunyoresa, kana chiito chingakodzera mushandisi kufambiswa kwebasa.
Chinangwa, kana chiito chinozotora mushandisi kubva mukufambiswa kwebasa.
Maturusi ekufambiswa kwebasa akangwara zvekuziva kana mushandisi akavhura email kana kudhawunirodha chinopihwa, uye inomisa nhevedzano yezviito zvinoenderana nehunhu ihwohwo. Izvi zvinoreva kuti, inogona kutumira email yakatevedzana, kana kunyange kushandura tarisiro yehupenyu nhanho zvichienderana nezvinoitwa nemushandisi.
Heino muenzaniso wekuti kufambiswa kwebasa kunogona kumisikidzwa:
Musiyano wakakosha kubva kune autoresponder ndewekuti workflows yakangwara: Vanogona kushandura mafambiro eako otomatiki akatevedzana zvichibva pane izvo tarisiro yako ichawana inobatsira.
Semuenzaniso, kana munyoreri mutsva akagamuchira email yekugamuchira uye iyo inotevera email inomisikidzwa kuti ivatumire chipo chavakatowana uye kudhawunirodha pasaiti yako, chishandiso chekufambisa basa chinoziva uye kugadzirisa. Mune autoresponder, mushandisi anogamuchira chaiyo seti yemaemail panguva dzakatarwa dzenguva zvisinei kuti chii chaanotora.
Nei izvi zvichikosha? Kutumira email chaiyo panguva isiriyo kunokuvadza kuzasi kwako.
6. Shandisa email marketing templates.
Email marketing templates - senge idzi kubva kuHubSpot - ndechimwe chinhu chikuru chekukubatsira nekushambadzira kwako email.
Kunze kwekunge iwe uri mugadziri uye mugadziri wepamusoro pekuve mushambadzi ane hunyanzvi, matemplate anokuchengetera toni yenguva - anotora dhizaini, kukodha, uye UX-tsanangudzo basa kunze kwekugadzira maemail ako.
Chengetedzo imwe chete: paunenge uchiita sarudzo yako, sarudza email matemplate ayo anoratidzwa kuti anoshanda.
Iwo emhando yepamusoro matemplate anobva kune akawanda vane mukurumbira ESPs izvo zvakavaedza pamusoro pezviuru zvedzimwe nzira. Saka, namatira kune nyanzvi.
Uye kutaura nezvezvinhu zvakaita sebasa remhando yepamusoro uye mukurumbira mukuru, kune mamwe maemail mirau yekuziva paunenge uchigadzira maemail uye kugadzira yako yekushambadzira nzira.
Mitemo yeemail inoenderana zvishuwo zvevatengi zvekuziva kuti sei uye nei ruzivo rwavo rwuri kushandiswa. Kana paine chero chinhu chatine hanya nacho, chiri kuenderana nezvinodiwa nevatengi vedu-kana vangangove vatengi-vanoda.
1. CAN-SPAM Kuteerera
Nehunyanzvi, CAN-SPAM ipfupiso yeKudzora Kurwiswa Kwezvisina Kukumbirwa Zvinonyadzisira uye Kushambadzira (nekuti dzimwe nguva vaviri vanoenda pamwechete).
Mukuita, inzira yekudzivirira kodzero yevanyoreri vako yekungogamuchira maemail avanenge vakumbira.
Mutemo wakadzikwa muna 2003 uye unoshanda kune chero maemail ekutengesa anoshandiswa kuita bhizinesi.
Hedzino nzira dzekuona kuti maemail ako ari CAN-SPAM anoenderana:
Sanganisira zita rako rekambani nekero mune yega email.
Isa zvinoonekwa zvekusanyoresa zvinongedzo mukati memaemail ako.
Shandisa kero dzeemail chaidzo mundima "Kubva" uye "Pindura kune".
Nyora mitsetse yezvidzidzo inoratidza zviri mukati meemail.
Ndokumbira utarise: Izvi hazvifanirwe kuvhiringidzwa kune zano repamutemo. Onai FTC nzvimbo kuti uwane rumwe ruzivo rwemutemo nezve CAN-SPAM mitemo.
2. Kutevedzera GDPR
Nepo vamwe vangaona iyi ichangobva kuitwa email mirau seinorema uye isingakodzeri, General Data Dziviriro Regulation (GDPR) inototiswededza pedyo nekuvaka hukama hunogara kwenguva refu uye hwekuvimba nevatengi vedu.
GDPR ndeye kupa vatengi vako kodzero yekusarudza. Ivo vanosarudza maemail ako. Vanosarudza kunzwa kubva kwauri. Vanosarudza zvigadzirwa zvako. Uye ndizvo chaizvo izvo inbound marketing iri pamusoro.
Chinhu chakakosha kuziva nezveGDPR ndechekuti inongoshanda kumabhizinesi anoshanda muEuropean Union uye mabhizinesi anotengesera vagari veEU. Kusateera kunozokonzera mari dzakakosha dzisina kukodzera njodzi, saka ita shuwa kuverenga GDPR nhungamiro zvachose.
Heino mhedziso yekuti ungatevedzera sei mitemo yeGDPR:
Shandisa mutauro wakajeka paunenge uchikumbira mvumo yekuchengetedza ruzivo rwemunhu.
Unganidza chete data rekuonana rinodikanwa uye rinoenderana nebhizinesi rako.
Chengetedza data rekuonana nenzira yakachengeteka uye ishandise chete kune chinangwa chakabvumiranwa.
Chengetedza data rezvinangwa zvebhizinesi zvinogoneka chete.
Delete contact data pakukumbira.
Ita kuti zvive nyore kune vanobatika kuzvibvisa kubva pane yako runyorwa kana kugadzirisa zvavanoda.
Tevedzera nekukurumidza kuchikumbiro cheanobatika chekuwana data ravo.
Chengetedza zvinyorwa zvekambani kuratidza kutevedzera GDPR.
Mitemo iyi ichatorwa zvakakomba (sezvavanofanira), saka ipfungwa yakanaka kugadzira a GDPR zano zvebhizinesi rako usati watanga kutumira maemail.
3. Dzivisa Spam Filters
Iwe unopedza nguva uchigadzira iyo email yakakwana uye uchiomerera kune mirau, saka chinhu chekupedzisira chaunoda kupedzisira chave mune spam folda.
Iwe unozoda kudzivirira iyo spam folda nekuti:
Zvinokuvadza mitengo yako yekuburitsa mukati mebhodhi.
Vako vaunosangana navo vangangopotsa ese maemail ako.
Iwe hauzokwanisi kuyera nemazvo yako email kushambadzira kushanda.
Analytics yako ichave yakatsveyama.
Iwe unogona kudzivirira kutorwa kune spam ne:
A whitelist anopesana neblacklist, zvichireva kuti irondedzero yevatumwa vanotenderwa vanotenderwa kusvika kuinbox yevanyoresa. Nzira iri nyore yekuita izvi ndeyekuita kuti munyoreri wako mutsva awedzere email yako kubhuku ravo rekero. Sanganisira mafambiro ekuita izvi mune yako yekugamuchira email.
Kuchengeta kopi yako.
Dzivisa kushandisa zvese zvivharo uye akawanda mapoinzi ekutaura, pamwe chete spam inokonzeresa mazwi, sekuti “sarudza kupinda”, “tinya pazasi”, uye “kurongeka”, zvinoonekwa zviri nyore nekumakwa neInternet Service Providers (ISPs).
Kushandisa yakavimbika email service provider.
Yako email sevhisi sevhisi inokanganisa kuburitsa kwako, saka namatira kune akasimbiswa, makambani anozivikanwa.
Kuita kaviri opt-in.
Kana mumwe munhu angopinda kune yako email runyorwa, tumira email uchivakumbira kuti vasimbise. Izvi zvinovimbisa kuti munyoreri wako mutsva anofarira zvemaemail ako uye anogona kunge achibatikana zvakanyanya.
(Ona zvimwe nzira dzaunogona kudzivirira iyo spam sefa.)
Uye chekupedzisira asi chisiri chidiki, iwe unofanirwa kugara uchiyera budiriro yeemail yako yekushambadzira kuedza. Pane akati wandei sarudzo dzaunogona kusarudza kubva kana zvasvika kune yako bhizinesi email yekushambadzira analytics.
Nekunyura mune yako email yekushambadzira analytics, iwe unozogona kuita zvirinani sarudzo dzine chokwadi chekukanganisa bhizinesi rako pazasi, taura nevanyoreri vako, vaverengi, uye vatengi, uye kupembedza basa rako kune imwe kambani yako yese.
Hedzino nzira dzakanakisa dzekuongorora kushanda kweemail yako yekushambadzira mishandirapamwe.
1. A/B edza maemail ako ekutengesa.
Haasi ese maemail mazita akagadzirwa akaenzana. Vamwe vateereri vanofarira kusarudzika uye vamwe vanozofunga kuti spammy. Vamwe vateereri vachada mabhatani anopenya, anobata maziso eCTA, uye vamwe vanozoda kufona kwakajeka-ku-chiito.
Iwe hauzomboziva kuti rudzii rwevanhu vanogadzira yako email runyorwa kudzamara waedza zvinosiyana. Ndipo panouya kuongororwa kweA/B kunobatsira.
Zvinoshamisa kuti, haasi mabhurendi mazhinji anozvishandisa. A 2021 Litmus kudzidza vakawana kuti 44% yevatengesi kashoma A / B kana multivariate kuyedza maemail avo. 19% chete vanozviita kazhinji kana nguva dzose.
Kuedza kweA/B, kana kupatsanura kuyedzwa, inzira yekuona kuti ndeupi rudzi rweemail rwunoita zvakanyanya nevateereri vako nekuongorora mhedzisiro yeemail A ichipesana neemail B.
Heino nhanho-ne-nhanho maitiro eA/B yekuyedza maemail ako:
sarudza mumwe shanduko yekuyedza panguva, semuenzaniso, mutsara wenyaya, CTA, mifananidzo.
Gadzira mavhezheni maviri eemail: imwe ine uye imwe isina shanduko.
Bvumira maemail ako kuti atumirwe panguva imwe chete kwenguva yakati.
Ongorora zvawawana uye chengeta chete shanduro yaita zvirinani.
Edza shanduko itsva uye dzokorora maitiro.
Vazhinji vanopa maemail masevhisi vanozove neA/B yekuyedza yakavakirwa musoftware yavo, izvo zvinozoita kuti zvive nyore kwauri kufananidza email mhinduro pasina rakawanda basa remaoko.
Iyo Yakazara Nhungamiro Yekuedzwa kweA / B
2. Seta email yekushambadzira KPIs.
Pane mana akakosha metrics ekutarisisa kana uchiongorora mashandiro eemail yako yekushambadzira mushandirapamwe.
Kununurwa inoyera mwero uyo maemail anosvika kumainbox evanoda kunyorera.
Open rate ndiyo chikamu chevanhu vanovhura email yako kana yangosvika kuinbox kwavo.
Clickthrough rate (CTR) ndiyo muzana yevanhu vanodzvanya pamaCTA ako.
Zvinyore inoyera huwandu hwevanhu vanobuda pane yako email runyorwa kana vangogamuchira email kubva kwauri.
3. Rongedza email zvikamu kuti uvandudze mhinduro.
Zvinhu zvakawanda zvinokanganisa maKPIs ako, uye zvichatora kumwe kuyedza uye kufungidzira kuti uone kuti ndeapi tweaks kumaemail ako achaunza shanduko huru.
Kana usiri kuwana nhamba dzaunoda, edza kutamba nemhando idzi natsurudza yako email mhinduro.
Ita shuwa kuti urikutevedzera zvakanakisa maitiro kana zvasvika pakunzvenga mafirita espam.
Bvisa vanhu vasingaite kubva pane yako email runyorwa kuti uchengete chete vanonyoresa.
Tarisa kuti ndeapi maemail akabhombwa uye bvisa iwo maemail kero kubva pane yako runyorwa.
Tamba nemutauro uri mumutsara wenyaya wako kukwezva vanhu kuti vadzvanye paemail yako.
Rongedza nguva uye zuva raunotumira email yako kuti uone zvinoshanda zvakanyanya.
Ongorora kupihwa kwako kuti uone kuti inopa kukosha kune yako yakakamurwa runyorwa.
Nyorazve kopi yako kuti uve nechokwadi chekuti zviri pachena zvaunoda kuti muverengi aite.
Edza maCTA akasiyana, semuenzaniso, graphic maringe neInline kopi, yakashinga maringe neyakajeka.
Kutanga, funga kana ichi chiri chikomborero chakavanza, sezvo mapato asingafarire ari kuzvibvisa kubva pane yako rondedzero.
Ongorora kana email yawakatumira inoenderana nerudzi rwako.
Ita shuwa kuti hauna kuita chirauro-uye-chinja nekuvimbisa chimwe chinhu uye kuendesa chimwe.
Ita shuwa kuti maemail ako ari kupa kukosha kune vateereri vako usati waedza upsell.
4. Shandisa email marketing report template.
Yako data haina chakanaka kana iwe usingakwanise kuzvitaura nenzira yakarongeka.
Chirevo chekushambadzira email ispredishiti kwaunogona kurekodha zvawawana munzvimbo imwechete kuti ikubatsire kuita zvirevo kubva kuKPIs dzako uye kutora matanho ekuzvivandudza.
Heano maitiro aunofanirwa kuronga report yako:
Huwandu hwemaemail akatumirwa
Nhamba yemaemail akaunzwa
Hurefu hweemail body
CTA (inline kana graphic)
Mwero wekutakurisa kwako wanga uri pamusoro here kana uchienzaniswa nenguva dzakapfuura?
Ko CTR yako yakaenzaniswa sei nechiyero chako chakavhurika?
Nhamba dzako dzekusanyoresa dzanga dzichienderana nemamwe maemail here?
Mutsetse wezvidzidzo wakaita zvirinani pane mamwe here?
Hurefu hweemail hunoita mutsauko muCTR here?
Imwe nzira yeCTA inogona kuita zvirinani here?
Mupiro waive wakakodzera chikamu cherunyorwa here?
Kutanga Email Marketing
Kunyange paine mitemo yakawanda yekutumira email yekushambadzira, chinonyanya kukosha ndeichi: Bata vanyoreri vako sevanhu.
Iwe unogona kuzadzisa zvese zvako email kushambadzira zvibodzwa kana iwe ukachengeta uyu wegoridhe mutemo wepamusoro-wepfungwa mune yega autoresponder, lead magineti, uye mutsara wenyaya.
Paunenge usina chokwadi kana iwe uchimboda kufemerwa, tendeukira kune mamwe makuru email marketing mienzaniso. Iwe unogona zvakare kutarisa mamwe anokurumidza ekuwedzera matipi muvhidhiyo iyi neHubSpot Academy:
Uye rangarira, vanyoreri vako vanoda kunzwa kubva kwauri uye ivo vanoda kuenderana newe. Iva chaiyo sosi, uye ivo vanozotarisira kuvhura email kubva kwauri sezvavaizoita chero shamwari yavo.
The 15 Best Email Newsletter Zvishandiso mu2020
Iyo Yakanakisa Yemahara Yemahara Ekushambadzira Software: Yakavimbika Roundup
Best Best Email Marketing Services